ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာကြီး မာ့ခ်တွိန်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသော ကွန်နက်တီကပ်ပြည်နယ်ရှိ ယာတောအိမ် (ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ စံအိမ်များ) - Property News in Myanmar | iMyanmarHouse.com
ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာကြီး မာ့ခ်တွိန်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသော ကွန်နက်တီကပ်ပြည်နယ်ရှိ ယာတောအိမ် (ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ စံအိမ်များ)
11 Jul 2019 12:55 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
459 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
အမေရိကန်စာပေ၏ ဖခင်ကြီးဟု ဝီလျံ ဖော့က်နာက တင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရသူ ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာကြီး မာ့ခ်တွိန်း၏ အမည်ရင်းမှာ ဆင်မြူရယ် လန်းဂွန် ကလဲမန်းစ်ဖြစ်ပြီး ၁၈၃၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်တွင် မွေးဖွားပြီး ၁၉၁၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သည်။
ကလောင်အမည် မာ့ခ်တွိန်းဖြင့်သာ လူသိများသည်။
The Gilded Age: A Tale of Today (၁၈၇၃ ခုနှစ်)၊ The Prince and the Pauper (၁၈၈၁)၊ A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (၁၈၈၉) ၊ The American Claimant (၁၈၉၂) ၊ Pudd'nhead Wilson (၁၈၉၄) ၊ Personal Recollections of Joan of Arc (၁၈၉၆) ၊ A Horse's Tale (၁၉၀၇) နှင့် The Mysterious Stranger (၁၉၁၆, ကွယ်လွန်ပြီးမှ ထုတ်ဝေ) ဝတ္ထုရှည်များ ရေးသားခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကွန်နက်တီကပ်ပြည်နယ်တွင် မာ့ခ်တွိန်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသော ယာတောအိမ်ကြီးတစ်လုံးရှိ၏။
မာ့ခ်တွိန်းသည် အဆိုပါနေအိမ်ကို ၁၉၀၉ ခုနှစ်အတွင်း သမီးဖြစ်သူအတွက် ဝယ်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တည်နေရာမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကွန်နက်တီကပ်ပြည်နယ်၊ ဖဲရဲဖီးခရိုင်၊ ရက်ဒင်းမြို့ကလေးတွင် ဖြစ်သည်။
ယာတောအကျယ်အဝန်းမှာ ၁၈ ဒသမ ၇ ဧကခန့်ရှိပြီး သမီးဖြစ်သူ ဂျင်းန် ကလီမန်းစ်အတွက် ၁၉၀၉ ခုနှစ်တွင် ဝယ်ယူပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မာ့ခ်တွိန်းစာကြည့်တိုက်ရှိ စာရွက်စာတမ်းများတွင် ဖော်ပြသည်။
မာ့ခ်တွိန်း၏ ပင်မနေအိမ်ဖြစ်သော ရက်ဒင်းမြို့တွင်ပင်ရှိသော Stormfield နေအိမ်နှင့် နီးကပ်စွာနေနိုင်ရန်အတွက် အဆိုပါယာတောကို ဝယ်ယူပေးခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
မာ့ခ်တွိန်းသည် Stormfield စံအိမ်တွင် ၁၉၀၈ ခုနှစ်မှ ကွယ်လွန်သွားသည့် ၁၉၁၀ ပြည့်နှစ်အထိ နေထိုင်သွားခဲ့သည်။
(၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင်မူ မီးသင့်လောင်မှုကြောင့် နေအိမ်ပျက်စီးခဲ့ပြီး ထိုနှစ်အတွင်းတွင်ပင် ပုံစံတူနေအိမ်ငယ် ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်)
ယာတောအိမ်ဝယ်ယူပြီးနောက် လအနည်းငယ်မျှသာရှိသေးချိန်တွင် မာ့ခ်တွိန်း၏သမီးဖြစ်သူဂျင်းန်မှာ ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရာ ကွယ်လွန်ချိန်၌ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးသည်။
ရေချိုးခန်းအတွင်း လဲကျသေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ကြရခြင်းဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်တို့၏ သုံးသပ်ချက်အရ နှလုံးဖောက်က သေဆုံးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
သမီးဖြစ်သူဆုံးပါးပြီးနောက် နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် မာ့ခ်တွိန်းသည်လည်း နှလုံးရောဂါဖြင့်ပင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၇၄ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
မာ့ခ်တွိန်းသည် သမီးကွယ်လွန်ပြီးနောက် ယာတောအိမ်ကို ရောင်းချလိုက်ကာ ရရှိလာသောငွေများကို သူ၏အမည်ဖြင့် စာကြည့်တိုက်တစ်ခု တည်ထောင်ပေးခဲ့သည်။
ဝယ်ယူလိုက်သည့် ပိုင်ရှင်များက ယာတောအိမ်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၅ သန်းဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ပြုပြင်မွမ်းမံမှု များစွာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယာတောခြံဝန်းအတွင်း ရှေးဟောင်းဟန် ယာတောအိမ်၊ စပါးကျီတစ်ခုနှင့် မာ့ခ်တွိန်း၏ အလုပ်ခန်းတစ်ခုတို့ ပါဝင်သည်။
ယာတောအိမ်မှာ ၁၇၈၇ ခုနှစ်ကတည်းက ဆောက်လုပ်ထားသည့်အိမ်ဖြစ်ပြီး စပါးကျီမှာမူ ၁၈၆၀ ခုနှစ်ခန့်တွင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် စပါးကျီကို ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ပြီး ဧည့်ဂေဟာအဖြစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့သည်။
(မာ့ခ်တွိန်း၏ ကမ္ဘာကျော် အတွေးအခေါ်များ)
အမှန်တရားက ဖိနပ်တွေ ၀တ်ဆင်နေတုန်းမှာပဲ မုသားက ကမ္ဘာတစ်ဝက်ထိ ခရီးဆက်နေနိုင်ခဲ့ပြီ ...
Giving up the habit of smoking is very easy. I've done it so many times.
အမရေိကနျစာပေ၏ ဖခငျကွီးဟု ဝီလြံ ဖော့ကျနာက တငျစားချေါဝျေါခွငျးခံရသူ ကမ်ဘာကြျော စာရေးဆရာကွီး မာ့ချတှိနျး၏ အမညျရငျးမှာ ဆငျမွူရယျ လနျးဂှနျ ကလဲမနျးဈဖွဈပွီး ၁၈၃၅ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာလ ၃၀ ရကျတှငျ မှေးဖှားပွီး ၁၉၁၀ ပွညျ့နှဈ၊ ဧပွီလ ၂၁ ရကျတှငျ ကှယျလှနျသညျ။
ကလောငျအမညျ မာ့ချတှိနျးဖွငျ့သာ လူသိမြားသညျ။
The Gilded Age: A Tale of Today (၁၈၇၃ ခုနှဈ)၊ The Prince and the Pauper (၁၈၈၁)၊ A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (၁၈၈၉) ၊ The American Claimant (၁၈၉၂) ၊ Pudd'nhead Wilson (၁၈၉၄) ၊ Personal Recollections of Joan of Arc (၁၈၉၆) ၊ A Horse's Tale (၁၉၀၇) နှငျ့ The Mysterious Stranger (၁၉၁၆, ကှယျလှနျပွီးမှ ထုတျဝေ) ဝတ်ထုရှညျမြား ရေးသားခဲ့သညျ။
အမရေိကနျပွညျထောငျစု၊ ကှနျနကျတီကပျပွညျနယျတှငျ မာ့ချတှိနျးပိုငျဆိုငျခဲ့ဖူးသော ယာတောအိမျကွီးတဈလုံးရှိ၏။
မာ့ချတှိနျးသညျ အဆိုပါနအေိမျကို ၁၉၀၉ ခုနှဈအတှငျး သမီးဖွဈသူအတှကျ ဝယျယူခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
တညျနရောမှာ အမရေိကနျပွညျထောငျစု၊ ကှနျနကျတီကပျပွညျနယျ၊ ဖဲရဲဖီးခရိုငျ၊ ရကျဒငျးမွို့ကလေးတှငျ ဖွဈသညျ။
ယာတောအကယျြအဝနျးမှာ ၁၈ ဒသမ ၇ ဧကခနျ့ရှိပွီး သမီးဖွဈသူ ဂငျြးနျ ကလီမနျးဈအတှကျ ၁၉၀၉ ခုနှဈတှငျ ဝယျယူပေးခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး မာ့ချတှိနျးစာကွညျ့တိုကျရှိ စာရှကျစာတမျးမြားတှငျ ဖျောပွသညျ။
မာ့ချတှိနျး၏ ပငျမနအေိမျဖွဈသော ရကျဒငျးမွို့တှငျပငျရှိသော Stormfield နအေိမျနှငျ့ နီးကပျစှာနနေိုငျရနျအတှကျ အဆိုပါယာတောကို ဝယျယူပေးခဲ့ခွငျးလညျး ဖွဈသညျ။
မာ့ချတှိနျးသညျ Stormfield စံအိမျတှငျ ၁၉၀၈ ခုနှဈမှ ကှယျလှနျသှားသညျ့ ၁၉၁၀ ပွညျ့နှဈအထိ နထေိုငျသှားခဲ့သညျ။
(၁၉၂၃ ခုနှဈတှငျမူ မီးသငျ့လောငျမှုကွောငျ့ နအေိမျပကျြစီးခဲ့ပွီး ထိုနှဈအတှငျးတှငျပငျ ပုံစံတူနအေိမျငယျ ပွနျလညျဆောကျလုပျခဲ့သညျ)
ယာတောအိမျဝယျယူပွီးနောကျ လအနညျးငယျမြှသာရှိသေးခြိနျတှငျ မာ့ချတှိနျး၏သမီးဖွဈသူဂငျြးနျမှာ ရုတျတရကျကှယျလှနျသှားခဲ့ရာ ကှယျလှနျခြိနျ၌ အသကျ ၂၉ နှဈအရှယျသာရှိသေးသညျ။
ရခြေိုးခနျးအတှငျး လဲကသြဆေုံးနသေညျကို တှခေဲ့ကွရခွငျးဖွဈပွီး ဆရာဝနျတို့၏ သုံးသပျခကျြအရ နှလုံးဖောကျက သဆေုံးခဲ့ကွခွငျးဖွဈသညျဟု ဆိုသညျ။
သမီးဖွဈသူဆုံးပါးပွီးနောကျ နှဈအနညျးငယျအကွာတှငျ မာ့ချတှိနျးသညျလညျး နှလုံးရောဂါဖွငျ့ပငျ ကှယျလှနျသှားခဲ့ပွီး ကှယျလှနျခြိနျတှငျ အသကျ ၇၄ နှဈရှိပွီ ဖွဈသညျ။
မာ့ချတှိနျးသညျ သမီးကှယျလှနျပွီးနောကျ ယာတောအိမျကို ရောငျးခလြိုကျကာ ရရှိလာသောငှမြေားကို သူ၏အမညျဖွငျ့ စာကွညျ့တိုကျတဈခု တညျထောငျပေးခဲ့သညျ။
ဝယျယူလိုကျသညျ့ ပိုငျရှငျမြားက ယာတောအိမျကို ၂၀၁၃ ခုနှဈတှငျ ကနျဒျေါလာ ၁ ဒသမ ၅ သနျးဖွငျ့ ဝယျယူခဲ့ပွီး ပွုပွငျမှမျးမံမှု မြားစှာ ပွုလုပျခဲ့သညျ။
ယာတောခွံဝနျးအတှငျး ရှေးဟောငျးဟနျ ယာတောအိမျ၊ စပါးကြီတဈခုနှငျ့ မာ့ချတှိနျး၏ အလုပျခနျးတဈခုတို့ ပါဝငျသညျ။
ယာတောအိမျမှာ ၁၇၈၇ ခုနှဈကတညျးက ဆောကျလုပျထားသညျ့အိမျဖွဈပွီး စပါးကြီမှာမူ ၁၈၆၀ ခုနှဈခနျ့တှငျ ဆောကျလုပျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျဟု ဆိုသညျ။
နောကျပိုငျးတှငျ စပါးကြီကို ပွုပွငျမှမျးမံခဲ့ပွီး ဧညျ့ဂဟောအဖွဈ ပွောငျးလဲအသုံးပွုခဲ့သညျ။
(မာ့ချတှိနျး၏ ကမ်ဘာကြျော အတှေးအချေါမြား)
အမှနျတရားက ဖိနပျတှေ ဝတျဆငျနတေုနျးမှာပဲ မုသားက ကမ်ဘာတဈဝကျထိ ခရီးဆကျနနေိုငျခဲ့ပွီ ...
အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် အိမ်ခြံမြေ အိမ် အရောင်း ဝယ်ယူ
မုဓိတာ အိမ်ယာ ( ၂ ) ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည်
Rental for mini condo apartment at Mya Kan Thar
$ 320 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)